စကားဝှက် ကာကွယ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » စကားဝှက် ကာကွယ်ခြင်း
Posted by မောင်လင်းငယ် on Sep 10, 2010 in Computers & Technology |0comments
Social စကားဝှက် အကြောင်း သိကောင်းစရာ
သင့် အလုပ်တွင်၊ သင့် အိမ်တွင်၊ ဘဏ်အကောင့်များ အစရှိသဖြင့် သင့် တွင် စကားဝှက် ဘယ်လောက်များများ ရှိပါသလဲ? ပျမ်းမျှ လူတစ်ယောက်အတွက် စကားဝှက်ရဲ့ ဂဏန်းနှစ်ခု အရေအတွက် အကြောင်းပြောနေတာက အလွန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒီစကားဝှက်များက သင်အတွက် အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ သင့် ဒေတာတွေ၊ ကိုယ်ပိုင် အသေးစိတ်အချက်တွေ၊ သင့်ပိုက်ဆံတွေ၊ သင့် ကိုယ်ပိုင် ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့် စကားဝှက်တစ်ချို့ ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင် သင်အနေနဲ့ ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ သင့် ကိုယ်ပိုင် အရင်းအမြစ်တစ်ချို့ကို မလည်ပတ်နိုင်တာကြောင့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူက သင့် စကားဝှက် ကို ခိုးယူတယ် ဆိုရင် ပိုပြီး ဆိုးလာတာတွေတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့် စကားဝှကို ပြုလုပ်တဲ့ အချိန်တွင် သင့်နာမည် သို့မဟုတ် သင့် ဇနီးရဲ့ နာမည်ကဲ့သို့သော သိသာတဲ့ စကားဝှက်များကို ရွေးချယ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ဒါ့အပြင် သင့် ဘောလုံး အသင်း၊ ၀ါသနာ၊ မွေးနေ့ သို့မဟုတ် သင့်အကြောင်းသိတဲ့ သင့် အနီးအနားကို လူတွေကို စွဲပြီး စကားဝှက်ကို မလုပ်ပါနဲ့။
သင့် စကားဝှက်ကို လုံခြုံအောင် သင်အနေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ဂဏန်း ခြောက်လုံးထက်ပိုပြိး အသုံးပြုပါ။ စာလုံးတွေနဲ့ ဂဏန်းတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးပြုပါ။ စာလုံးကြီးတွေ သုံးပါ။ သင့် စကားဝှက်များကို ပုံမှန် ပြောင်းပေးပါ။ အီးမေးအကောင့်တစ်ခုကို မှတ်ပုံတင်တဲ့ အခါတွင် သင့် စကားဝှက် ပျောက်သွားခဲ့ရင် အကူအညီအတွက် နည်းလမ်းနှစ်ခု သုံးနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းတစ်ခုက လျှိ့ဝှက်တဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေ ( Secret question-answer ) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွင် သင့် စကားဝှက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရင် သင်ကို မေးမယ့် မေးခွန်းကို ဖြည့်လိုက်ပါ။သင်ကသာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေနိုင်မယ်ဆိုရင် စကားဝှက်အသစ်တစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တခြားနည်းလမ်းက ဒုတိယ အီးမေးလိပ်စာကို အသုံးပြုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာ တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင် သင့် စကားဝှက်ကို ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အကောင့်နှစ်ခုကို မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအကောင့်နှစ်ခုကို ဒုတိယ အကောင့်တစ်ခု အဖြစ် ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ယခု သင့်တွင် ကောင်းမွန်တဲ့ စကားဝှတ်တစ်ခု ရှိနေတာကြောင့် စဉ်းစားစရာ မေးခွန်းတစ်ခုက စကားဝှက်ကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒါက အမြဲတမ်း ခက်ခဲတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့် စကားဝှက်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အလုံခြုံသော နည်းလမ်းတစ်ခုက ဦးနှောက်ထဲကို မှတ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထူးသဖြင့် သင်က စကားဝှက် အများကြီးမှတ်ထားရမယ်ဆိုရင် သင့် စကားဝှက် ကို သင် အနေနဲ့ မေ့နိုင်တာကြောင့် ဒီနည်းလမ်းက ယုံကြည်စိတ်ချလို့ မရပါဘူး။ သင့်တွင် စကားဝှက် အများကြီး ရှိမယ်ဆိုရင် စကားဝှက် ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဆော့ဝဲကို အသုံးပြုပါ။ စကားဝှက် ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းရဲ့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုက စကားဝှက်နဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့ Excel Sheet ကို အသုံးပြုခြင်းပါပဲ။
အနည်းဆုံးတော့ စကားဝှက်ကို သင့် စားပွဲ၊ မှတ်စုစာအုပ်တို့ အပေါ်တွင် ရေးသားတဲ့ အဆိုးရွားဆုံး နည်းလမ်းကို တော့ ရှောင်ရှားပါ။
သင့် စကားဝှက် က ဘယ်လောက်ပဲ အရေး မကြီးကြီး သင့် စကားဝှက်ကို အခိုးခံရဖို့ အမြဲတမ်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ဒုတိယ အီးမေး အကောင်တစ်ခုတောင် ဟက်ကာများရဲ့ ပစ်မှတ်တစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ စကားဝှက် ခိုးယူခြင်းရဲ့ အသုံးများဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုက မှားယွင်းတဲ့ အဖွဲ့ဝင် ပေးအပ်မူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပေးအပ်မူက ၀န်ဆောင်မူကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ သင်ကို ပေးအပ်တဲ့ Spam မေး တစ်ခုအဖြစ် ရောက်လာပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မူများက သင့် စကားဝှက်နဲ့ အီးမေး အကောင့်ကို တောင်းပြီး အဖွဲ့ဝင် ဖောင်ကို ပေးအပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ဘာကြောင့် သင့် စကားဝှက်ကို တောင်းရတာလဲ? ရိုးစင်တဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့် အကောင့်ကို ခိုးဖို့နဲ့ Spam လုပ်ဖို့ အတွက် အသုံးပြုဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးတော့ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းလို့ရအောင် သူတို့ရဲ့ Mail Databases အတွက် သင့် အဆက်အသွယ်များကို စုစည်းဖို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Social Hacking ဆိုတာ သင့် စကားဝှက်ကို ခိုးယူဖို့ တခြားသော နည်းလမ်းတစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟက်ကာတစ်ယောက်က System Administrator အဖြစ် သင့်ကို ဆက်သွယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့် စကားဝှက် ပါဝင်တဲ့ သင့် ကိုယ်ပိုင် ဒေတာများကို တောင်းပါတယ်။ ဒါက Technical Hacking တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ Social Hacking တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွင် ဟက်ကာက လူတစ်ချို့ ရဲ့ လုံခြုံရေး သတိလက်လွတ်မူကို အသုံြး့ပုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင် အလွန် ရင်းနှီးတဲ့ လူတစ်ယောက်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သို့မဟုတ် System Administrator ကို သင့် စကားဝှက် ပေးခဲ့ရင်တောင်မှ သင့် စကားဝှက်ကို မျှဝေဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် သင့် စကားဝှက်ကို ချက်ချင်း ပြောင်းပစ်ပါ။ စကားဝှက်ပေးလိုက်တဲ့ လူက ယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဆိုရင်တောင် သူရဲ့ စကားဝှက် ထိန်းသိမ်းမူ နည်းလမ်းက ယုံကြည်စိတ်ချရချင်မှ ရမှာပါ။
နိဂုံးတစ်ရပ်အနေနဲ့ လုံခြုံတဲ့ စကားဝှက် ထိ်န်းသိမ်းမူနည်းလမ်းများ အဖြစ် လုံခြုံ စိတ်ချရအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။
( ၀န်ခံချက်။ ။စာရေးဆရာ Laurus Nobilis ရဲ့ ဆောင်းပါး Password Protection ကို မြန်မာ ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပါသည်။ )